Iifonti ezi-7 ezizithandayo zoBuchule phakathi kwabaYili abaDumileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kunzima ukuyifumana iifonti ezintsha, ezikumgangatho ophezulu ukusetyenziswa kobungcali simahla, ke ukuba ufuna ukuba noluhlu olulungileyo, kuya kufuneka utyale ixesha nexesha kwenye enokuthi ilisebenzise kakuhle.
Yintoni enokuba nzima ngakumbi kukufuna ingcali kunye nenye entsha sisiqinisekiso sokuthenga esipheleleyo. Ngesi sizathu sokuba kungene oku kuya kukubeka ngaphambili Iifonti zobungcali ezi-7 ekhethekileyo kubayili.
5 Injongo yeFF
Ukongeza kwiifonti zedijithali ze-MOMA ngo-2011, i-FF Din yiyo enye yeentandokazi phakathi kwabaqulunqi abaninzi. Yenziwe ngu-Albert-Jan Pool phakathi kuka-1995 no-2009, le sans serif yenzelwe intengiso, ukupakisha, iilogo, uphawu kunye nokunye.
Omnye wemithombo ethandwa kakhulu yobuchwephesha, ngakumbi ngabo basebenzela iwebhu. Uyilo ngokutsha lwefonti ye-Alternate Gothic sans serif. Iphinde yadizayinwa ukuze ilunge ngakumbi kwimiboniso yedijithali esemgangathweni.
Igama lesiseko seAlps emantla e-Itali, iAviano yi Ifonti enobuhle yemigca yodidi oluphezulu. Yenziwe nguJeremy Dooley.
Enye yeefonti ezikumgangatho ophezulu ngobuchule buka-Alex Trochut. Idalwe ngo-2012, isetyenziswe kakhulu. Ngaba ngokusekwe kwizakhiwo zamaRoma iklasikhi kwaye ineendidi ezahlukeneyo zokwahluka.
Yenziwe ngu-Erik Spiekerman, u-FF Meta wabizwa okokuqala ngokuba yi-PT55, ifonti eyenziwe ngobukhulu obukhulu zePosi yaseNtshona Jamani ngo-1955. Ucoceko nolwahlukileyo kuyilo oluza kongezwa liZiko loLondolozo lweMbali lobuGcisa baseNew York ngo-2011.
Imele umsebenzi weminyaka emithathu kaSeb Lester kwaye uyilelwe i Imidiya yanamhlanje yedijithali. Injongo yayikukudala uhlobo oluthile lokushicilela kunye neendawo ezihlanganisiweyo, ngokutsho komyili omnye kwiwebhusayithi yakhe.
Ukusuka kule mihla ukuya kweyona calligraphy intle kolu ngeno.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti zobugcisa ezi-7 okanye iifonti eziyiliweyo
Molo Manuel! Ukudityaniswa kakuhle kweentlobo kuba inyani kukuba kunzima kakhulu ukufumana iifonti zasimahla ezingafaniyo nezisetyenziswa ngumntu wonke, njengee-Open sans ngoku ezifashiniyo. Inyani yile yokuba ndihlala ndisebenzisa i-sans serif fonts kuba kuyilo lwewebhu ndicinga ukuba isicatshulwa sikhangeleka sicacile kwaye isiphumo sicocekile, kuxhomekeke kwinto esetyenziselwa yona ...
Wamkelekile Alvaro, bonwabele! Kuyinyani ukuba akukho lula ukuzifumana. Ndiyathanda ukuba bakuncede! Ukubulisa
Eli gcisa lishiya ingubo kuLwandle oluFileyo kangangeminyaka emi-2 kwaye liyiguqula libe sisiqwenga setyuwa neglasi